Tsy ampy ny fanaovana bilaogy, “Press the Flesh”! | Martech Zone
Talata, May 27, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity dia fehezanteny iray izay vao leo ahy - haingana - mandritra ity firotsahan-kofidina ho filoham-pirenena ity. Tsy azoko antoka hoe iza no nanoratra ny teny tany am-boalohany fa hitako nampiasaina betsaka tamin'ity vanim-potoana ity. Vao tsy ela akory izay, ny governoran'i Virginia Andrefana dia nampiasa io teny io hiadian-kevitra momba ny antony nahalasan'i Barack Obama an'i West Virginia tamin'ny fihotsahan'ny tany tamin'i Hillary Clinton. Miezaka miaro ny fihevitry ny mpanohitra izy fa mbola manana olana amin'ny hazakazaka i West Virginia ary very izany fotsiny i Obama satria tsy nandany fotoana ampy nofo manery, aka mifandray tànana.
Tokony hahaliana ny mpivarotra ny mahatsapa ny fiantraikany lehibe amin'izany nofo manery tena manana amin'ny fifidianana. Ny fampielezan-kevitra dia toy ny fanentanana ara-barotra momba ny database amin'ny methamphetamines. Ny lafiny rehetra dia mitondra jeneraly matematika, mametraka marketing ara-potoana sy kendrena amin'ny alàlan'ny fampitaovana isan-karazany, ary miasa mafy tsindrio ny nofo. Ireo mpivarotra dia tokony hanamarika, ivelan'ny fahalotoan'ny politika, fa mandeha ireo tetika ireo.
Izay tokony hiankina amin'ny fampielezan-kevitra Obama
Betsaka amintsika no manadino fa i Hillary dia noraisina ho Kandidà filoham-pirenena tamin'ny taona 2008 ary i Barack Obama dia tao anatin'ny lisitr'ireo fohy sy mpanatrika tsy ampy traikefa 'ao amin'ny Antoko Demokratika. Nahomby anefa ny ezaka nataony tamin'ny marketing. Zahao ny tranokala Obama dia hahita hafatra ianao isaky ny kendrenao:
Eto Indianapolis, nahazo mailaka viral aho izay afaka manome, amin'ny anaran'ny olona iray, amin'ny fampielezan-kevitra. Ny fampielezan-kevitr'i Obama dia nanokatra birao iray (ary avy eo dia nakatony) birao 1 atsimon'ny Circle eto Indy - trano lehibe voalohany tsindrio ny nofo. Nahazo mailaka mivantana ihany koa aho tamin'ny fampielezan-kevitra Obama. Jery ​​todika ny zava-nitranga dia ho hitanao fa milina mpandray tànana i Obama, misy mihoatra 16,000 hetsika hatreto ary taonina hafa sisa.
Tsy mino aho hoe resin'i West Virginia i Obama satria tsy nifandray tànana izy. Manaiky aho fa resy tsotra izao satria ny azy hafatra tsy nifandray tsara tamin'i Appalachia.
Miverina amin'ny resaka.
Tsy mampiroborobo an'i Barack Obama ho filoham-pirenena aho fa manaiky fotsiny ilay milina marketing tsy mampino napetrany. Izay rehetra ataon'ny ekipany dia mety avokoa - ary zava-dehibe ny manamarika fa tsy diso anjara mihitsy ry zareo manindry ny nofo.
Miasa amiko ny Pressing Flesh
Nahita fahombiazana kely teo amin'ny media sosialy aho, indrindra teto Indianapolis. Ny mahaliana dia misy maro Bilaogera Indianapolis izay alokako zara raha azoko raha jerena amin'ny Internet. Amin'ny sehatra isam-paritra, na izany aza, mino aho fa manana anarana (sy tarehy) betsaka izay tadidin'ny olona aho.
Mila ny fahombiazako eo an-toerana aho manindry ny nofo. Ny asako miaraka Indiana kely kokoa, Làlana ara-kolontsaina Indy, Ny Komity Superbowl 2012 ary manararaotra ny fotoana rehetra hampianarana ny mpandraharaha eo an-toerana momba ny haino aman-jery sosialy dia nisy fiatraikany lehibe kokoa noho ny bilaogiko. Pilina sarotra atelina noho ny fotoana rehetra apetrako ao amin'ny bilaogiko fa zava-dehibe ho an'ny olona ny mahatsapa fa tsy ampy fotsiny ny fanaovana bilaogy!
Mivoaha ary tsindrio ny nofo! Ny fitorahana bilaogy dia manome mangarahara sy mahitsy izay tsy azon'ny tranokala brochure marketing - nefa mbola tsy manome ny traikefa hijerena olona iray amin'ny masony sy hikitikitika ny tanany.
Zava-dehibe ny manamarika fa hanana bilaogy lehibe kokoa aho miaraka amina firenena lehibe kokoa raha afaka manao izany amin'ny hetsika nasionaly aho. Sarotra hatrany izany amin'ny asa manontolo andro, saingy manantena aho fa hahatratra vitsivitsy amin'ity taona ity.
Tags: 2008fifidiananain-personfivorianaObamapolitikatsindrio ny nofoFanamafisana ny varotra
Sahirana amin'ny Noobs ve ianao?
May 28, 2008 amin'ny 8: 06 AM
Fomba fijery tsara sy voalanjalanja, Doug. Nampahatsiahy anao ny bilaoginao ny lahatsoratra iray novakiako tamin'ity herinandro lasa ity izay mamaritra ny iray amin'ireo lehiben'ny fampielezan-kevitry ny senatera Clinton nialoha lalana ny fanangonana $ 100 avy amin'ny vehivavy amerikana 1,000,000.
Endrey ny fampiakarana blockbuster! Saingy nolavin'ny mpanolotsaina mpanentana iray hafa ny tolokevitra. (Ary fantatsika hoe iza ny kandidà mahomby amin'ny fanangonana vola kely: Obama.)
Mikasika ny "fanindriana ny nofo" vs teknikan'ny Internet: heveriko fa samy hanana dividends samy hafa ny tsirairay. Ny mpanjifa sasany (na ny mpifidy) dia ny fanatrarana manokana no ho voakasik'izany. Ny hafa tsy hifandraisanao mihitsy raha tsy hoe manana Internet ianao. Ny valin'ny fanamafisana dia samy mandray.
(Na, toy ny filazan'ny namana taloha iray rehefa nanolotra ny safidiny gilasy na gilasy sokola: “Eny!”)
May 28, 2008 ao amin'ny 5: 29 PM
Doug: manaiky tanteraka aho. Nahavita fanamarihana bebe kokoa bebe kokoa teto Atlanta aho Mpandraharaha amin'ny Internet Atlanta ary ny fihaonana sy hetsika hafa mifandraika atrehiko sy tohanako noho izay azoko natao ny blaogiko. Fanampin'izany, mahafa-po kokoa ny miaraka amin'ny olona mifanatrika fa tsy irery ao ambadiky ny efijery sy ny efijery momba ny solosaina.
May 29, 2008 ao amin'ny 9: 30 PM
Eny, izahay ao amin'ny Truffle Media dia manohy manatrika hetsika (World Pork Expo dia amin'ny herinandro ho avy ireo liana :) miampy telefaona taloha sy mailaka mahazatra izahay hikitihana ny toby.
Mampiasa fantsona media vaovao ihany koa izahay mba hifandraisana amin'ireo liana amin'ny fambolena: Twitter (http://twitter.com/trufflemedia), ny bilaogy / podcasts SwineCast.com (sy ny rahavaviny momba ny henan'omby, ronono, akoho amam-borona ary vokatra), Flickr (http://www.flickr.com/photos/trufflemedia/), ary Blip.tv (http://trufflemedia.blip.tv/).
Saingy tsy misy izany hoe eo amin'ny fanatrehana izany olona izany mba handrenesana izay mahaliana ny olona, ​​hiresahana amin'ny labiera eny an-tànana, ary hijerena ny fihenan-tsakafo / tenim-batana amin'ny lohahevitra saro-pady (resaka katsaka ho an'ny sakafo na katsaka ho an'ny solika dia resaka malaza ao. Iowa :)
Misaotra indray Doug.
Jun 7, 2008 ao amin'ny 11: 20 PM
Rehefa avy nandeha 10,000 kilaometatra namakivaky ny firenena tamin'ny Blog Tour izahay dia mino mafy ny herin'ny tambajotra sosialy F2F manokana aho. Ny fihomehezana dia tsy voavidim-bola raha oharina amin'ny lol.
Jun 11, 2008 ao amin'ny 3: 53 PM
Doug - Fandefasana tsara, rangahy. Hitako ny fifanomezan-tànana tsara sy ny tsiky iray izay misy akony lehibe kokoa amin'ny varotra, ny tambajotra ary ny fananganana fifandraisana noho ny zavatra hafa rehetra azoko atao.
Vao tsy ela akory izay no nahitako ny tenako fa niova asa, io ihany no faharoa hatramin'ny nanombohako niditra tamin'ny fampandrosoana ny asa manontolo andro. Rehefa nanadihady ny rehetra dia nanontany ahy ny olona hoe: "Inona no ataonao hananganana fironana / orinasa?" Tsy misy fisalasalana fa ny tambajotranoko manokana no loharano fitarihana lehibe indrindra rehefa mahazo referrals amin'izy ireo aho. Izany dia tsy azo atao raha tsy amin'ny alàlan'ny fitondrana fifandraisana sarobidy sy ifandraisan'ny samy olona. Mampiasa matetika ilay andian-teny hoe "ahinjino ny tànanao" rehefa mandefa mailaka olona iray. Toy ny ao, “Manantena ny handray tanana anao aho indray andro any.” Tsy mpankafy ……… aho ”manindry ny nofo”. Karazana feo… ..mety.